.စိန်ထည်ပစ္စည်းတွေသာမက မုန့်ဖာ တွေကိုပါ သိန်းနဲ့ချီပြီးရောင်းခဲ့ရ ကြောင်း ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ပြော ပြ လာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး. – Askstyle
.စိန်ထည်ပစ္စည်းတွေသာမက မုန့်ဖာ တွေကိုပါ သိန်းနဲ့ချီပြီးရောင်းခဲ့ရ ကြောင်း ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ပြော ပြ လာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး.
ပရိသတ်ကြီးရေကြော်ငြာ မင်းသမီးလဲဖြစ် အကယ်ဒမီနှစ်ဆုရှင်လဲဖြစ် ပရိသတ်အချစ်တွေကို အမြဲရရှိနေသူလဲဖြစ်တဲ့ သူဆိုတာ အနုပညာလောကမှာ ထက်ထက်မိုးဦးပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ ဝေ ဖန်ခံရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မဝေဖန်ခံရပဲ မျက်နှာမြင်တာနဲ့တင် ပိုပိုအချစ် ခံလာရသူ ပါ။
အနုပညာလောကမှ ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တိုင်းရဲ့ရင်မှာ ထက် ထက် မိုးဦးက အမြဲ အချစ်တော်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ အခုတလော သူမကြော်ငြာပြီး ရောင်း ပေးနေတဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေက သက်သေပါပဲ။ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ သူမရဲ့ တိုက်ရိုက် ထု တ် လွှင့်မှုတွေရဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းအားတွေက ဘယ် ဆယ်လီ ဘယ်အနုပညာရှင်တွေကမှ လိုက်မ မှီ တာ အမှန်ပါပဲနော်။
ဒီနေ့မှာလည်း ”ထက်ကတော့ ဘုရင်ဘီစကစ်မှာ မုန့်ဖာတွေကိုလေ သိန်းနဲ့ချီပြီး ရောင်းခဲ့ပြီ။
သောင်း နဲ့ချီအားပေးကြတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ချစ်ရသူတွေအားလုံးကိုလည်းချစ်တယ် မေ တ္တာတွေလည်း ပို့ပေးနေပါတယ်။ ဒီနေ့ညမှာလည်း ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူတူ လှူခဲ့ရတယ်။
အရမ်းပျော်တယ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာသတင်းလေးကိုဝေမျှခဲ့တာပါ။ကားတွေ အိမ် တွေသာအရောင်းသွက် တာမဟုတ်ဘဲ ဘာရောင်းရောင်းကို ပရိသတ်တေဇ်ကအားတပးဝန်း ရံ နေတာပါပဲနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရေၾကာ္ျငာ မင္းသမီးလဲျဖစ္ အကယ္ဒမီႏွစ္ဆုရွင္လဲျဖစ္ ပရိသတ္အခ်စ္ေတြကို အၿမဲရရွိေနသူလဲျဖစ္တဲ့ သူဆိုတာ အႏုပညာေလာကမွာ ထက္ထက္မိုးဦးပဲရွိမယ္ထင္တယ္။ ေဝ ဖန္ခံရႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ မေဝဖန္ခံရပဲ မ်က္ႏွာျမင္တာနဲ႔တင္ ပိုပိုအခ်စ္ ခံလာရသူ ပါ။
အႏုပညာေလာကမွ ေပ်ာက္လိုက္ေပၚလိုက္ ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ပရိသတ္တိုင္းရဲ႕ရင္မွာ ထက္ ထက္ မိုးဦးက အၿမဲ အခ်စ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေနခဲ့တယ္ဆိုတာ အခုတေလာ သူမေၾကာ္ျငာၿပီး ေရာင္း ေပးေနတဲ့ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈေတြက သက္ေသပါပဲ။ဘယ္သူနဲ႔မွမတူတဲ့ သူမရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ထု တ္ လႊင့္မႈေတြရဲ႕ ၾကည့္ရႈႏႈန္းအားေတြက ဘယ္ ဆယ္လီ ဘယ္အႏုပညာရွင္ေတြကမွ လိုက္မ မွီ တာ အမွန္ပါပဲေနာ္။
ဒီေန႔မွာလည္း ”ထက္ကေတာ့ ဘုရင္ဘီစကစ္မွာ မုန႔္ဖာေတြကိုေလ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရာင္းခဲ့ၿပီ။
ေသာင္း နဲ႔ခ်ီအားေပးၾကတဲ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ခ်စ္ရသူေတြအားလုံးကိုလည္းခ်စ္တယ္ ေမ တၱာေတြလည္း ပို႔ေပးေနပါတယ္။ ဒီေန႔ညမွာလည္း ခ်စ္ရသူေတြနဲ႔အတူတူ လႉခဲ့ရတယ္။
အရမ္းေပ်ာ္တယ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ေပ်ာ္႐ႊင္စရာသတင္းေလးကိုေဝမွ်ခဲ့တာပါ။ကားေတြ အိမ္ ေတြသာအေရာင္းသြက္ တာမဟုတ္ဘဲ ဘာေရာင္းေရာင္းကို ပရိသတ္ေတဇ္ကအားတပးဝန္း ရံ ေနတာပါပဲေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။